कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज वैशाख १३ गते शुक्रबारको राशिफल ! - PUBLICAAWAJ
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज वैशाख १३ गते शुक्रबारको राशिफल !
प्रकाशित : बिहिबार, बैशाख १२, २०७६१६:४६ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
वि.सं. २०७६ साल वैशाख १३ गते। शुक्रबार। इश्वी सन् २०१९ अप्रिल २६ तारिख। शकसंवत् १९४१। परिधावी संवत्सर। उत्तरायण। वसन्त ऋतु। नेपाल संवत् ११३९ चौलागा। वैशाख कृष्णपक्ष। तिथि– सप्तमी, १६:१३ बजेउप्रान्त अष्टमी। नक्षत्र– उत्तराषाढा, २४:४१ बजेउप्रान्त श्रवण। योग– साध्य, २७:०३ बजेउप्रान्त शुभ। करण– वव, १६:१३ बजेदेखि वालव, २९:०१ बजेउप्रान्त कौलव। आनन्दादिमा आनन्द योग। चन्द्रराशि– मकर। काठमाडौंमा सूर्योदय– ५:३१ बजे, सूर्यास्त– १८:३४ बजे र दिनमान ३२ घडी ३६ पला। अष्टमी व्रत। सर्वार्थसिद्धि योग २४:४१ बजे प्रारम्भ।
कुनै पनि कार्य या प्रोजेक्टमा सरकारको तर्फबाट लाभ मिल्नेछ । अफिसमा महत्वपूर्ण मुद्दाको सम्बन्धमा शिर्ष अधिकारीहरुको साथ विचार विमर्श हुनेछ । अफिसको कामकाजबाट बाहिर जानु पर्नेछ । कार्यभार बढ्नेछ । पारिवारिक मामलामा गहिरो रुची लिएर सदस्यको साथ विचार विमर्श गर्नु हुनेछ । गृह सजावटको लागी आयोजना गर्नु हुनेछ । माताको साथ अधिक निकटता अनुभव हुनेछ ।
विदेश गमनको लागी सुनौलो अवसर मिल्नेछ । विदेश बस्ने स्नेहीजन तथा मित्रबाट समाचार आउनेछ । व्यापारीलाई व्यापारमा धन लाभ हुनेछ । नयाँ आयोजना हातमा लिन सक्नु हुनेछ । लामो दुरीको यात्रा हुनेछ । तिर्थ यात्राको सम्भावना छ । आध्यात्मिकतामा प्रगती गर्न सक्नु हुनेछ । सन्तानको प्रगती हुनेछ । स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु होला ।
दिन प्रतिकुल छ । आज हरेक तर्फबाट सावधान रहनु होला । कुनै पनि नयाँ कार्यको प्रारम्भ नगर्नु होला । क्रोधको कारण केहि अनिष्ट नहोस् यसको खास ध्यान राख्नु होला । रोगीले कुनै नयाँ उपचार या शल्यक्रिया आज नगराउनु होला । काम्व्रित्तिमा संयम राख्ने कोशिश गर्नु होला । अधिक खर्च हुनेछ । घर या अफिसमा वाणीमा संयम राख्दा विवाद या झैँ-झगडाबाट बच्न सकिन्छ । केहि कारण समयानुसार खान-पानको व्यवस्था हुँदैन । इश्वरको आराधनाबाट शान्ती मिल्नेछ ।
आजको सम्पूर्ण दिन आनन्द-प्रमोद तथा मनोरंजनमा बित्नेछ । विपरीत लिंगीय व्यक्तिको साथ भेटघाट हुनेछ । आनन्द-प्रमोदको साधन, वस्त्र इत्यादीको किनमेल हुनेछ । प्रणय सम्बन्धमा सफलता मिल्नेछ । उत्तम भोजन, वहान सुखको योग छ । प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ । व्यावसायिक क्षेत्रमा लाभदायी दिन रहेको छ । स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ ।
आजको दिन मिश्र फलदायी रहेको छ । घरमा शान्तीको वातावरण रहनेछ । सहकर्मीको कम सहयोग मिल्नेछ । दैनिक कार्यमा केहि अवरोध आउनेछ । शत्रु तथा प्रतिस्पर्धीको कारण समस्या आउनेछ । शिर्ष अधिकारीहरुको साथ विवादमा नपर्नु होला । मानसिक व्याकुलताको अनुभव हुनेछ । स्वास्थ्य साधारण रहनेछ । निकै परिश्रम पाचात कम सफलता मिल्नेछ ।
सन्तानलाई लिएर चिन्तित रहनु हुनेछ । मन विचल्लित रहन सक्दछ । पेटसंग सम्बन्धित रोगको कारण समस्या आउन सक्दछ । विद्योपार्जन गर्नेहरुको अभ्यासमा अवरोध आउनेछ । आकस्मिक खर्चको सम्भावना छ । वातचितमा तार्किक एवम् बौद्धिक चर्चाबाट टाढा रहनु होला । आकस्मिक खर्चको सम्भावना छ । प्रियजन संग मिलाप हुनेछ ।
मानसिक रुपमा थकित अनुभव गर्नु हुनेछ । आज तपाइँ केहि अधिक भावुक रहनु हुनेछ । मनमा उठी रहेका विचारको कारण केहि समस्या आउनेछ । माता तथा स्त्रीको विषयमा चिन्ताले सताउनेछ । प्रवासको लागी आजको दिन निकै प्रतिकुल छ । पानीबाट टाढा रहनु होला । निन्द्रा अपूर्ण रहंदा मानसिक चिन्ता रहनेछ ।
कार्य सफलता, आर्थिक लाभ र भाग्य वृद्धिको योग छ । भाई-बहिनीको साथ कौटूम्बिक चर्चा हुनेछ । तँ मनमा स्फूर्ति र आनादा अनुभव हुनेछ । मित्र तथा संगी-सम्बन्धीको आगमनले आनन्द दिनेछ । आध्यात्मिक तथा रहश्यमयि विद्याको अध्ययनमा रुची बढ्नेछ । लघु प्रवास हुनेछ ।
आजको दिन मध्यम फलदायी रहनेछ । निरर्थक खर्च हुनेछ । मनमा ग्लानी रहनेछ । परिवारजनको साथ मनमुटाव हुन सक्दछ । कार्यमा अपेक्षित सफलता मिल्दैन । दुविधायुक्त मनोदशाको कारण निर्णय लिन सक्नु हुने छैन अत: आज कुनै पनि महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय नलिनु होला । कार्यभार बढ्नेछ ।
इश्वरको नाम स्मरण गर्दा दिन शुभ रहनेछ । धार्मिक कार्य र पुजापाठ हुनेछ । गृहस्थजीवनमा आनन्दमय वातावरण रहनेछ । तपाइँको हरेक कार्य सरलताको साथ पूरा हुनेछ । मित्र संगी-सम्बन्धीको तर्फबाट उपहार मिल्नेछ । शारीरिक र मानसिक रुपले प्रफुल्लित रहनु हुनेछ । नोकरी व्यवसायमा अनुकुल परिस्थिति रहनेछ । दाम्पत्य जीवनमा परमानन्दको अनुभव गर्नु हुनेछ ।
मानसिक रुपले एकाग्रता रहनेछ । अधिक खर्च हुनेछ । स्वास्थ्यको विषयमा ध्यान राख्नु होला । पूँजी निवेश अनुचित स्थानमा होस् यसको ध्यान राख्नु होला । क्रोधमा संयम राख्नु होला ।
मित्रको तर्फबाट लाभ हुनुको साथै उनको लागी धन खर्च पनि हुनेछ । सामाजिक कार्यमा अधिक अभिरुचि रहनेछ । कुनै रमणीय स्थलमा प्रवासको आयोजना हुनेछ । नयाँ मित्र बन्नेछन् । घरबाट शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ । सन्तानबाट लाभ हुनेछ । आकस्मिक धनलाभको योग छ ।
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज कात्तिक २२ गते शुक्रबारको राशि’फल !